September 25, 2021 - Celegroup
စကားကြီး ၄ ခွန်း ပုံပြင်
September 25, 2021 Celegroup1975 0
စကားကြီး ၄ ခွန်း ပုံပြင် ရှေးရှေးတုန်းက တိုင်းပြည် တစ်ပြည်မှာ အုပ်ချုပ် နေတဲ့ ဘုရင်ကြီး တစ်ပါးဟာ တစ်နေ့မှာ သူဆင်းရဲတစ်ယောက် အယောင်ဆောင် ရုပ်ဖျက်ပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေ လေ့လာဖို့ မင်းနေပြည်က တိတ်တဆိတ် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ ပထမဦးဆုံး ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာက အလွန်ဆင်းရဲတဲ့ အဖိုးအို လင်မယားနေတဲ့ တဲအိမ် အစုတ်ကလေး ဆီကိုပါ။ အဖိုးအိုတို့ လင်မယားဟာ ပင်ပန်း ဆင်းရဲစွာနဲ့ […]
ဒီလိုပစ္စည်းမျိုးတွေကို ရေခဲသေတ္တာထဲ လွယ်လွယ်မထည့်မိပါစေနဲ့….
အစားအစာတွေမကုန်ရင်ရေခဲသေတ္တာထဲလွယ်လွယ်ထည့်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာတွေက အစားအစာတွေကိုတာရှည်ခံအောင်သိမ်းဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် တချို့အစားအစာ တွေကတော့ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်လိုက်တော့မှ အရသာပျက်သွားတာမျိုး၊ တခြားအစားအစာတွေရဲ့ အနံ့အရသာကိုပါပျက်သွားစေတာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်။ ရေခဲသေတ္တာထဲမသိမ်းဆည်းသင့်တဲ့ အစားအစာတွေအကြောင်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ပေါင်မုန့် စားမကုန်တဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကိုရေခဲသေတ္တာမှာ ထည့်သိမ်းပြီး နောက်မှစားမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးကို မေ့လိုက်ပါတော့။ အအေးခန်းထဲမှာ ထည့်ထားရင် ပေါင်မုန့်သားက ပိုပြီးမာသွားပြီး မှိုတက်တာကလည်း ပိုမြန်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပေါင်မုန့်တွေကို ခြောက်သွေ့ပြီးအေးမြတဲ့နေရာတွေမှာ ထားတာ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။ ဖရဲသီး ပူအိုက်နေတဲ့ နေ့လည်ခင်းကြီးမှာ ဖရဲသီးကို အအေးခန်းထဲမှာထည့်၊ အရမ်းအေးသွားရင် ပြန်ထုတ်ပြီး […]
ယောက်ျားတိုင်း မရနိုင်တဲ့ မိန်းမ ဖြစ်အောင်နေလိုက်ပါ….
ယောက်ျားတိုင်း လိုချင်နေတဲ့မိန်းမ ဖြစ်အောင် မနေပါနဲ့ယောက်ျားတိုင်း မရနိုင်တဲ့မိန်းမ ဖြစ်အောင်နေ.. ယောက်ျားတိုင်းလွယ်လွယ်ရတဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့ယောက်ျားတိုင်းလွယ်လွယ်မရနိုင်တဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ.. ပျော့ညံ့နေတဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့စိတ်ဓာတ်မာကျော့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမပြတ်သားတဲ့မိန်းမ ဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးနောက်လှည့်မကြည့်တတ်တဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ.. အရာရာအရှုံးပေးတတ်တဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့အရှုံးတွေထဲ့ကသင်ခန်းစာယူပြီးဘဝခရီးဆက်နိုင်တဲ့မိန်းဖြစ်အောင်နေထိုင်ပါ.. မျက်ရည်လွယ်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့..မျက်ရည်ကျတိုင်းကိုယ်မျက်ရည်ကိုယ်သုတ်ပြီးပြုံးနိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ အချစ်တွေအလွမ်းတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့မိန်းမဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့..အချစ်ဆိုတာမရှိမဖြစ်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်နေထိုင်အောင်ကြိုးစားပါ.. အိမ်နောက်ဖေးမှာဘဝကုန်ဆုံးတော့မယ်မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်မနေပါနဲ့နဲ့ အိမ်ထောင်ဦးစီးကိုလမ်းပြနိုင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ.. အသိဥာဏ်မဲ့တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်မနေထိုင်ပါနဲ့..အသိဥာဏ်ကြွယ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါ… တန်ဖိုးမဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်မနေထိုင်ပါနဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါအနာဂတ်အမေဖြစ်လာမယ့်မိန်းမတွေ ထက်မြက်ဖို့လို့ပါတယ်.. Credit to original Zawgyi ဖြင့်ဖတ်ပါ ယောကျြားတိုငျး မရနိုငျတဲ့ မိနျးမ ဖွဈအောငျနလေိုကျပါ…. ယောကျြားတိုငျး လိုခငြျနတေဲ့မိနျးမ ဖွဈအောငျ မနပေါနဲ့ယောကျြားတိုငျး မရနိုငျတဲ့မိန်းမ ဖြဈေအာင်ေန.. ယောကျြားတိုငျးလှယျလှယျရတဲ့မိနျးမဖွဈအောငျမနပေါနဲ့ယောကျြားတိုငျးလှယျလှယျမရနိုငျတဲ့မိနျးမဖွဈအောငျကွိုးစားပါ.. ပြော့ညံ့နတေဲ့မိနျးမဖွဈအောငျမနပေါနဲ့စိတျဓာတျမာကြော့တဲ့မိနျးမတဈယောကျဖွဈအောငျကွိုးစားပါမပွတျသားတဲ့မိနျးမ […]
ရှေးတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ အဌာရသ (၁၈)ရပ််ဆိုသည်မှာ
ရှေးသမိိုင်း ၊ ပုံပြင် ၊ ဒဏ္ဍာရီများကိိုဖတ်မိလျှင် ဘုရင်မျိုးနွွယ် ၊ မင်းညီမင်းသားများသည်် အရွယ်ရောက်ပါက တက္ကသိုလ်ပြည် သို့သွားကာ ဒီသာပါမောက္ခဆရာကြီးထံတွင် အဌာရသ ပညာရပ်များကို သင်ကြားတဲ့အကြောင်း မကြာခဏတွေ့ဖူးပါလိိမ့်မယ်။မသင်မဖြစ်သင်ရတဲ့ ပညာတွေလို့ ဆိုပါတယ်။ ထိို ယောက်ျား တိို့တပ်အပ်သော အဌာရသ (၁၈) ရပ် တိို့မှာ အမျိုးအစား စုံလင်လှသည်။ ထိုအထဲမှ တစ်မျိုးလောက်သာ ထူးချွန်လျှင် ဆရာတစ်ဆူလုပ်လို့ရသည်။ (၁၈) မျိုးစလုံး တတ်လျှင်ကား ဆိုဖွယ်ရာ […]
အသတ်ခံရမယ့် နွားတစ်ကောင်ကို ကယ်တင်ပြီး မွေးစားလိုက်မိတဲ့ ပဲခူးသူ အပျိုကြီး မမ ရဲ့ထူးဆန်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်
ပဲခူးမြိ့ုဈေးကြီး ၁၉လမ်း မှ”ဟင်္သာဧကရီ” အထည်ဆိုင်ပိုင်ရှင် အပျိုးကြီး မမြတ်သီရိသည်သူ့အထည်ဆိုင်ရှေ့ကနေဖြတ်ဆွဲသွားတဲ့နွားတစ်ကောင် ကိုမြင်ပြီးနွားဆွဲလာတဲ့ ကလိကျေးရွာကနွားပွဲစား ကိုမောင်ထွန်းကို“ဒီနွားကိုဘာလုပ်မှာလဲ”ဟုအမှတ်မထင်မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်… သူမနှင့်နွားပွဲစားတို့စကားပြောနေစဉ်နွားကြီးကမျက်ရည်တွေစီးကျပြီးသူမကိုကြည့်နေတာကြောင့်သနားပြီးဒီနွားကြီးကိုပေါက်ဈေးထက်၃ဆခန့်(၃၄သိန်း) ပေးပြီးဝယ်ယူထားလိုက်ပါတယ်။ အခုဆိုသူကယ်တင်ထားတဲ့နွားကြီးကိုရေမိုးချိုးအမွှေးနဲ့သာများလိမ်းကျံပြီးသူ့အထည်ဆိုင်ထဲမှာမွေးမြူထားပါတယ်။ ဒီသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ နွားကြီးကိုလာရောက်ကြည့်ရှူသူများဖြင့်အထူးစည်ကား နေပါတယ်။ နွားကြီးကိုဝယ်ပြီးနာရီးပိုင်းအတွင်းမှာပဲ သူ့ဆိုင်ဟာမထင် မှတ်လောက်အောင်ဈေးရောင်းကောင်းခဲ့ပါတယ်။ သူ့တစ်သက်ဒီနွားကြီး မသေမချင်းပြုစုကျွေးမွေးသွား မယ်လို့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှူတဲ့သူတွေကိုအပျိုကြီးမမကဂရုဏာသံလေးနဲ့ရှင်းပြနေပါတယ်။ ဒီနွားကြီးကိုသူနှစ်သက်တဲ့ အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပဲခူးသားသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ “ထွန်းကိုကို”လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ Credit:မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ) ထံမှ ကူးယူဖော်ပြပါတယ်။ ပဲခူးၿမိ့ုေဈးႀကီး ၁၉လမ္း မွ”ဟသၤာဧကရီ” အထည္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ အပ်ိဳးႀကီး မျမတ္သီရိသည္သူ႔အထည္ဆိုင္ေရွ႕ကေန ျဖတ္ဆြဲသြားတဲ့ႏြားတစ္ေကာင္ […]
ဖုန္းသုံးတဲ့အခါ လူတိုင္း လုပ္မိတက္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ အမွား (၅)ခု…
ဖုန်းတွေဟာ လူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအတူရှိတဲ့ အဖော်တစ်ယောက်လို ဖြစ်နေပါပြီ။ လူအချင်းချင်းတောင်မှ လူကောင်းလူဆိုး ခွဲခြားပေါင်းရသေးတာပဲ။ ဒီတော့ ၂၄ နာရီနီးပါး အနားအမြဲရှိနေတဲ့ ဖုန်းရဲ့ ကောင်းတဲ့ဆိုးတဲ့အချက်လေးတွေကို မှတ်သားထားပြီး ကိုယ့်အတွက်မကောင်းတဲ့ အချက်တွေကို မလုပ်မိစေဖို့ သတိထားဆင်ခြင်ကြရအောင်နော် (၁) ဖုန်းနဲ့အတူအိပ်ခြင်း ဖုန်းဆိုတာဟာ အခြေခံအားဖြင့် လျှပ်စီးသံလိုက်စက်ကွင်းတွေကို ကူးပြောင်းပေးတဲ့၊ လက်ခံပေးတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုချင်တာက ဖုန်းကနေ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေ ထွက်ပါတယ်။ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ အချိန်ကြာထိတွေ့ခြင်းက ဦးနှောက်ကို […]
Fbေၾကာင့္ မိသားစုၿပိဳကြဲၿပီး အသက္ပါေပးလိုက္ရတဲ့ က်ေနာ့္သူငယ္ခ်င္း (ျဖစ္ရပ္မွန္ )
တကယ်ရှိတယ်.တကယ်ဖြစ်သွားပါပြီ….Fbကြောင့် မိသားစုပြိုကွဲပြီး အသက်ပါပေးလိုက်ရတဲ့ ကျနော့်သူငယ်ချင်း (ဖြစ်ရပ်မှန် ) သူတို့မိသားစုဘဝထဲကို ဝင်ရောက်ဖျက်စီးသွားတဲ့အရာတခုက Fbမှာပါတဲ့ messengerလေးတခု ဆိုရင် မမှားပါဘူး ။ ဒီနေ့ခေတ် Online အသုံးပြုသူ တချို့ဟာ Fb ဆိုတဲ့ စိတ်ကွယ်ရာ အရပ်ကနေ အိမ်ထောင်ရှိတာ မရှိတာ နားမလည်ကြပဲ ဒု သ န သောဆိုတဲ့ အပြစ်ကို လူမသိ သူမသိ တချို့တွေ ကျူးလွန် နေကြခြင်း ဖြစ်ပါတယ် […]
အေမကိုခ်စ္တဲ့သားဟာ မယားမခ်စ္ဘူးဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ပါေစနဲ႔ငါ့သား အေမနဲ႔မိသားစုကိုလဲခ်စ္ပါ မိခင္မ်ိဳးႏြယ္ဝင္ဇနီးသည္ကိုလဲခ်စ္ပါ..အေမ့အတြက္သားေကာင္း အစ္မညီမအတြက္ ေမာင္ေကာင္း၊ အစ္ကိုေကာင္းျဖစ္ေပမဲ့ ဇနီးသည္ကို မေကာင္းဘူး ဆိုတာမ်ိဳး မျဖစ္ေစနဲ႔ကြဲ႕ မိသားစုကိုခ်စ္သလို ဇနီးသည္ကိုခ်စ္ေပးပါ….. မိဘအိမ္ ေမာင္ႏွမအိမ္ ဇနီးသည္ မသိဘဲမသြားနဲ႔ငါ့သား သူတို႔မိသားစုေတြ ငါ့ကြယ္ရာ ငါ့ေယာက္်ားကိုဘာေသြးထိုးေနပါလိမ့္လို႔ သူ႔ဖက္ကအျမင္မ်ိဳးျဖစ္ေစတတ္လို႔ တတ္နိုင္ရင္ ငါ့သားမိသားစုဆီသြားရင္ ဇနီးကိုေခၚသြားကြဲ႕ မလိုက္တာေတာ့သူ႔အပိုင္းေပါ့ ေခၚပါရဲ့နဲ႔မလိုက္ပဲ စကားနာထိုးတာ ေသြးထိုးတာလဲလက္မခံနဲ႔ငါ့သား မိသားစုနဲ႔ဇနီးသည္ၾကား သမာသမတ္က်က် မၽွမၽွတတျဖစ္ပါေစ…။ ငါ့လုပ္စာပဲ ငါ့မိဘ ေမာင္ႏွမ ေပးတာ […]